Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo kulan is-wareysi ah la qaatay bulshada iyo maamulka magaalada Sama-reeb+Sawirro. | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR GALMUDUG Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo kulan is-wareysi ah la qaatay bulshada iyo maamulka...
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo kulan is-wareysi ah la qaatay bulshada iyo maamulka magaalada Sama-reeb+Sawirro.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed “Cumar Filish” ayaa xalay kulan is-wareysi ah la qaatay dhallinyarada iyo maamulka magaalada Sama-reeb ee caasimadda Galmudug.
Previous articleMalleeshiyada Al-shabaab oo jab xooggan lagu gaarsiiyay dagaal ka dhacay Buuraleyda Galgala.
Next articleMunaasabad loo sameeyay Taliyeyaal xil isku wareejinaya.”Sawirro”